စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ - ရေပူစတိုးဆိုင်→ခရမ်းလွန်မီးခွက်များ•ရေပေးဝေသူများ•သောက်သူများ
alia, defining, ရောင်းသူ၊ စတိုးဆိုင်နှင့်စားသုံးသူ၏အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးဆုံးအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည့်စတိုးဆိုင်မှတစ်ဆင့်အရောင်းစာချုပ်များချုပ်ဆိုရန်စည်းမျဉ်းများ။
1 § အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
2 § ရောင်းသူနှင့်ဆက်သွယ်ပါ
3 § နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ
4 § စတိုးဆိုင်တွင်စျေးဝယ်ခြင်း
5 § ငွေပေးချေမှု
6 § စာချုပ်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်
7 § စာချုပ်မှဆုတ်ခွာခွင့်
8 § စာချုပ်မှဆုတ်ခွာပိုင်ခွင့်မှခြွင်းချက်
9 § တိုင်ကြားချက်များ
10 § ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ
11 § ကြိုတင်မှာကြားထား
နောက်ဆက်တွဲ ၁ - ပုံစံထုတ်ယူပုံစံ
အလုပ်လုပ်ရက် - ရုံးပိတ်ရက်များမှအပတနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့များ။
အကောင့် - သီးခြားစည်းမျဉ်းများဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသော free Store လုပ်ဆောင်ချက် (အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်ပံ့ပိုးထားသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခု) သည် ၀ ယ်သူသည်သူ၏တစ် ဦး ချင်းအကောင့်ကိုစတိုးဆိုင်တွင်ထားရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
စားသုံးသူ - အရပ်ဘက်ကျင့်ထုံး၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအတွင်းစားသုံးသူ။
ဝယ်သူ - စတိုးဆိုင်ရှိဝယ်သူတိုင်း။
စည်းမျဉ်းများ - ဤစည်းမျဉ်းများ။
ကုန်ဆိုင် - Waterpoint.pl/sklep တွင်ရောင်းသူမှဖွင့်ထားသော waterpoint.pl အွန်လိုင်းစတိုး
ကုန်သည် - ရေအမှတ်တံဆိပ်SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄသည်သူတို့၏မှတ်ပုံတင်ရုံးနှင့် ul ။ Fort Służew 1 B / 10, 02-787 Warsaw, KRS နံပါတ် 0000604168, NIP နံပါတ် 5213723972, NIP နံပါတ် 36379813000000, ဝေါ့စဝါမြို့တော်ဝါဆောမြို့တော်၏ခရိုင်တရားရုံးမှလုပ်ငန်းရှင်များမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အမျိုးသားတရားရုံးမှတ်ပုံတင်ခြင်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်။ ။
§ ၂ ရောင်းသူနှင့်ဆက်သွယ်ရန်
စာတိုက်လိပ်စာ: ul ။ ဝိန်း Fort Służew 1 B / 10, 02-787 ဝါဆော
ဖုန်းနံပါတ်: 502 091 710
§ ၃ နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ
အပိုတွင်ဖော်ပြထားသောလိုအပ်ချက်များအပြင် Store တွင်အမှာစာကိုတင်ရန် ၁။ တက်ကြွသောအီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုလိုအပ်သည်။
§ ၄ စတိုးဆိုင်တွင်ဈေးဝယ်ခြင်း
စတိုးတွင်မြင်နိုင်သောကုန်ပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းများသည် VAT အပါအ ၀ င်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်စုစုပေါင်းစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။
ရောင်းသူမှညွှန်ကြားချက်၏စုစုပေါင်းစျေးနှုန်းသည်စတိုးဆိုင်တွင်ဖော်ပြထားသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်ပါကကုန်ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်များပါ ၀ င်ကြောင်းထောက်ပြသည်။
၀ ယ်ယူရန်ရွေးချယ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းကို Store ရှိ basket ထဲသို့ထည့်သင့်သည်။
ထို့နောက် ၀ ယ်သူသည် Store တွင်ရရှိနိုင်သည့်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းနှင့်အမှာစာအတွက်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
၀ ယ်သူမှပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများအတည်ပြုခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလက်ခံခြင်းအပေါ်တွင်မှာစာကိုမှာယူပါမည်။
မှာယူသူသည်ရောင်းသူနှင့်ရောင်းသူကြားအရောင်းအ ၀ ယ်စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်သည်။
ရောင်းသူသည်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ပြီးချိန်တွင်ကုန်ပစ္စည်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ကာလတွင်အရောင်းအ ၀ ယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှု၏အတည်ပြုချက်ကိုစားသုံးသူအားပေးလိမ့်မည်။
ဝယ်သူသည်စတိုးတွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတွင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည့်အမိန့်တစ်ခုစီအားဖြင့်သူ၏အချက်အလက်များကိုပေးခြင်းဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိပဲ ၀ ယ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။
§ ၅ ငွေပေးချေခြင်း
၀ ယ်သူ၏ရွေးချယ်မှုပေါ် မူတည်၍ သင်ထားသည့်အမှာစာကိုသင်ပေးချေနိုင်သည်။
သင် PayU ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်းမှတဆင့်ငွေပေးချေရန်ရွေးချယ်ပါက PayU SA သည်အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
၀ ယ်သူသည်ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုကိုရွေးချယ်ပါကအမှာစာပြီးသည့်နေ့ (၁) ရက်အတွင်းအမှာစာကိုပေးချေရမည်။
ရောင်းသူကအချို့သောငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များအရ ၄ င်းတို့၏တိကျမှုကြောင့်အမှာစာကိုအမှာစာပေးပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းငွေပေးချေနိုင်သည်။
စတိုးဆိုင်တွင် ၀ ယ်ယူခြင်းအားဖြင့်ဝယ်သူသည်ရောင်းသူမှအီလက်ထရောနစ်ငွေတောင်းခံလွှာကိုလက်ခံသည်။ ဝယ်သူသည်သူ၏လက်ခံမှုကိုရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
မှာယူမည့်အချိန်မှာ ၁၄ ရက်ဖြစ်သည်။
အမှာစာတစ်ခုအရ ၀ ယ်သူသည်မတူညီသောကုန်ပစ္စည်းများကိုကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ယူသည့်အချိန်တွင်အမှာစာသည်ကုန်ဆုံးရန်အရှည်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်နှင့်သင့်လျော်သည့်နေ့တွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
Store တွင် ၀ ယ်ထားသောပစ္စည်းများကို ၀ ယ်သူမှရွေးချယ်သောပေးပို့သည့်နည်းလမ်းပေါ် မူတည်၍ ပို့သည်။
§ ၇ စာချုပ်မှနှုတ်ယူပိုင်ခွင့်
သုံးစွဲသူသည်အကြောင်းပြချက်မပါဘဲ ၁၄ ရက်အတွင်းစည်းမျဉ်း ၈၊ ပုဒ်မ ၈ အရအရောင်းဆိုင်မှတစ်ဆင့်ရောင်းသူနှင့်ချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်မှထုတ်ယူခွင့်ရှိသည်။
စာချုပ်မှနုတ်ထွက်ရန်နောက်ဆုံးနေ့သည် ၁၄ ရက်မှပြီးဆုံးလိမ့်မည်။
စားသုံးသူကဝယ်ယူသည့်သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သူ မှလွဲ၍ အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်သည်ကုန်ပစ္စည်းများ၏နောက်ဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကိုသီးခြားစီပေးပို့သည့်ပစ္စည်းများစွာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလွှဲပြောင်းရန်တာ ၀ န်ယူသည်။
စာချုပ်၏နိဂုံးချုပ် - ဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာထောက်ပံ့ရေးအတွက်စာချုပ်တစ်ခု၏အမှု၌။
စားသုံးသူစာချုပ်ကနေဆုတ်ခွာပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ရန်အဘို့အဘို့, သူကပြတ်ပြတ်သားသားကြေညာချက်အားဖြင့်စာချုပ်ကနေဆုတ်ခွာရန်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်။ စည်းမျဉ်းများ၏§2မှာပေးထားတဲ့ဒေတာကိုသုံးပြီး, ရောင်းသူအကြောင်းကြားရမယ်စာပို့သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကပေးပို့သတင်းအချက်အလက်) ။
စာချုပ်ကနေဆုတ်ခွာ၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့ရောင်းသူကုန်ပစ္စည်းများပို့ဆောင်၏ကုန်ကျစရိတ်များအပါအဝင်သူထံမှလက်ခံရရှိအားလုံးငွေပေးချေမှု, စားသုံးသူထံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိ (စျေးအသက်သာဆုံးစံချိန်စံညွှန်းထက်အခြားစားသုံးသူများကရွေးချယ်တင်ပို့၏နည်းလမ်းကနေရရှိလာတဲ့အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်မှလွဲ။ ရောင်းချသူ) ကချက်ချင်းနှင့်မည်သည့်အမှု၌မ။ စာချုပ်မှနှုတ်ထွက်ခွင့်ကိုအသုံးပြုရန်စားသုံးသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ရောင်းသူအားအကြောင်းကြားသောနေ့မှ ၁၄ ရက်ထက်မပို။
ဝယ်သူကကွဲပြားသောဖြေရှင်းချက်ကိုသဘောမတူပါကမူလငွေပေးချေမှုတွင်သုံးစွဲသူကအသုံးပြုသောငွေပေးချေမှုပုံစံများကို အသုံးပြု၍ ပြန်လည်ပေးချေမှုကိုရောင်းသူမှပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ကိစ္စရပ်တစ်ခုစီတွင်စားသုံးသူသည်ဤပြန်လာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အခကြေးငွေမယူဆောင်ရပါ။
ရောင်းသူသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုလက်ခံရရှိသည်အထိဖြစ်စေ၊ မည်သည့်အဖြစ်အပျက်သည်ပထမအကြိမ်ဖြစ်ပျက်သည်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းထံပြန်လည်ရောက်ရှိကြောင်းအထောက်အထားမပြသမချင်းငွေပြန်အမ်းငွေကိုမပေးနိုင်ပေ။
ရောင်းသူကသင့်အားကုန်ပစ္စည်းများကိုအောက်ပါလိပ်စာသို့ပြန်ပို့ရန်တောင်းဆိုသည်။ ul ။ Fort Służew 1 B / 10, 02-787 Warszawa ကိုချက်ချင်းနှင့်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုကုန်သည်များသည်အရောင်းစာချုပ်မှနုတ်ထွက်ခြင်းကိုအကြောင်းကြားသူမှရောင်းသူအားအကြောင်းကြားသောနေ့မှ ၁၄ ရက်ထက်မပိုစေရ။ အကယ်၍ စားသုံးသူသည်ကုန်ပစ္စည်းများကို ၁၄ ရက်မတိုင်မီပြန်ပို့ပါကနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ကိုသတ်မှတ်သည်။
စားသုံးသူသည်ကုန်ပစ္စည်း၏သဘောသဘာ ၀၊ ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတို့ကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်ထက်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုခြင်းမှရရှိလာသောကုန်ပစ္စည်းများ၏တန်ဖိုးလျှော့ချမှုအတွက်သာတာ ၀ န်ရှိသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများသည်၎င်းတို့၏သဘောသဘာဝအရပုံမှန်စာတိုက်ဖြင့်ပြန်ပို့။ မရပါကစားသုံးသူသည်ကုန်ပစ္စည်းများပြန်ပို့သည့်တိုက်ရိုက်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်းပေးရလိမ့်မည်။ စတိုးဆိုင်ရှိကုန်ပစ္စည်းများ၏ဖော်ပြချက်တွင် (သို့) အမှာစာမှာထားသည့်အခါဝယ်သူကဤကုန်ကျစရိတ်၏ခန့်မှန်းငွေပမာဏကိုအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
§ ၈ မှправыမှစာချုပ်မှထွက်ခွာရန်ခြွင်းချက်များ
၀ န်ဆောင်မှု၏အကြောင်းအရာသည် ၀ ယ်ယူသူ၏သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီထုတ်လုပ်သည်သို့မဟုတ်သူ၏တစ် ဦး ချင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အစေခံသည့်ထုတ်လုပ်မှုမဟုတ်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
၀ န်ဆောင်မှု၏အကြောင်းအရာသည်တံဆိပ်ခတ်သောအထုပ်ထဲတွင်အပ်ထားသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အကယ်၍ အထုပ်ကိုပို့ပြီးပါကထိုအထုပ်ကိုဖွင့်လျှင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုကြောင့်အထုပ်ကိုဖွင့်ပြီးနောက် ပြန်၍ မရပါ။
၀ န်ဆောင်မှု၏ဘာသာရပ်သည်ပစ္စည်းများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ဖြန့်ဝေပြီးနောက်သူတို့၏သဘောသဘာဝကြောင့်အခြားပစ္စည်းများနှင့်မကွာခဏချိတ်ဆက်နေသောအရာများဖြစ်သည်။
ကြေးပေးသွင်းခြင်းဆိုင်ရာစာချုပ် မှလွဲ၍ သတင်းစာများ၊ စာနယ်ဇင်းများသို့မဟုတ်မဂ္ဂဇင်းများပေးပို့ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းသို့မဟုတ်လုပ်ခသည်စီးပွားရေးစျေးကွက်တွင်အတက်အကျပေါ် မူတည်၍ လုပ်ငန်းရှင်သည်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောကြောင့်စာချုပ်မှနုတ်ထွက်ရန်သတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
သိသာထင်ရှားသည့်ကြားခံတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိသောဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာများပေးပို့ခြင်းအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်သည်စာချုပ်မှနှုတ်ထွက်ရန်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီနှင့်စာချုပ်မှနုတ်ထွက်ခွင့်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းရှင်အားအကြောင်းကြားပြီးနောက်ဖျော်ဖြေမှုသည်စားသုံးသူ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့်စတင်ပါက။
အကွာအဝေးကန်ထရိုက်မှနုတ်ထွက်ခွင့်ကိုစားသုံးသူ မှလွဲ၍ အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်မရနိုင်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်းများတွင်ချို့ယွင်းချက်ရှိပါက ၀ ယ်သူသည်နိုင်ငံသားကျင့်ထုံးဥပဒေတွင်ဖော်ပြထားသောအာမခံသို့မဟုတ်အာမခံချက်ကို အခြေခံ၍ တရား ၀ င်အာမခံချက်ကို အခြေခံ၍ ၀ ယ်ယူသူမှတိုင်ကြားနိုင်သည်။
အာမခံကို အသုံးပြု၍ ၀ ယ်သူသည်နိုင်ငံသားကျင့်ထုံးဥပဒေတွင်သတ်မှတ်ထားသောစည်းကမ်းချက်များနှင့်သတ်မှတ်ကာလအတွင်းတွင် -
သိသာထင်ရှားသောအပြစ်အနာအဆာဖြစ်လျှင် - စာချုပ်မှနုတ်ထွက်ကြောင်းကြေငြာချက်တင်သွင်းပါ
ချို့ယွင်းချက်ကနေအခမဲ့တ ဦး တည်းနှင့်အတူပစ္စည်း၏အစားထိုးလိုအပ်သည်
ရောင်းသူကအာမခံအပေါ် အခြေခံ၍ တိုင်ကြားချက်အားစည်းကမ်းချက်များ§ ၂ တွင်ဖော်ပြထားသောစာတိုက်သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်လိပ်စာသို့တင်ပြရန်တောင်းဆိုသည်။
အကယ်၍ တိုင်ကြားချက်ကိုစဉ်းစားရန်အတွက်ကြော်ငြာထားသည့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းသူထံသို့ပေးပို့ရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါက ၀ ယ်သူသည် ၀ ယ်သူ၏အသုံးစရိတ်ဖြင့် ၀ ယ်သူ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူသူအားလိပ်စာသို့လိပ်စာသို့ပို့ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ဝိန်း Fort Służew 1 B / 10, 02-787 ဝါဆော။
အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းအတွက်အာမခံချက်ထပ်မံပေးအပ်ထားပါက၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များအပြင်အခြေအနေနှင့်ပါတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို Store ရှိထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
စတိုးဆိုင်၏လည်ပတ်မှုနှင့်ပတ်သတ်သောတိုင်ကြားချက်များကိုစည်းမျဉ်း§ ၂ တွင်ဖော်ပြထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာသို့ပို့သင့်သည်။
ရောင်းသူမှတိုင်ကြားချက်ကို ၁၄ ရက်အတွင်းစဉ်းစားရမည်။တိုင်ကြားချက်များနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုဆက်လက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ပြင်ပနည်းလမ်းများ
အရည်အချင်းရှိသောကုန်သွယ်ရေးစစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးမှူးကပြုလုပ်သောဖျန်ဖြေခြင်း၊ စည်းကမ်းချက်အရလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာအခမဲ့ဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးရေးစာရင်းကိုဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်သည်။ https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
ကုန်သွယ်ရေးစစ်ဆေးရေး၏ပြည်နယ်စစ်ဆေးရေးမှူးတွင်လုပ်ကိုင်နေသောအမြဲတမ်းစားသုံးသူခုံသမာဓိရုံး၏အရည်အချင်းပြည့်မှီသောနယ်မြေကိုအကူအညီပေးခြင်း၊ ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတရားရုံးမတိုင်မှီအမှုအားထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လျှောက်လွှာတင်ခြင်း။ စည်းကမ်းချက်အရလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာအခမဲ့ဖြစ်သည်။ တရားရုံးများ၏စာရင်းကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
မြူနီစီပယ်သို့မဟုတ် poviat စားသုံးသူ Ombudsman ထံမှအခမဲ့အကူအညီ။
ODR အင်တာနက်ပလက်ဖောင်းတွင် - http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
စတိုးဆိုင်ကိုအသုံးပြုစဉ်ဝယ်သူမှပေးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏စီမံခန့်ခွဲသူသည်ရောင်းသူဖြစ်သည်။ ရောင်းချသူမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအပြောင်းအလဲနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို - အချက်အလက်အပြောင်းအလဲအတွက်အခြားရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အချက်များအပြင်အချက်အလက်လက်ခံသူများအပါအ ၀ င် - ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနိယာမအရဥရောပပါလီမန်၏အထွေထွေစည်းမျဉ်းတွင်ပါ ၀ င်သောပွင့်လင်းမြင်သာမှုမူဘောင်မှတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ) ဒေတာကာကွယ်မှုအပေါ် -RODO"။
စတိုးဆိုင်ရှိဝယ်ယူမှုများနှင့် ဆက်စပ်၍ ၀ ယ်သူမှပေးသောရောင်းချသူမှ ၀ ယ်သူ၏အချက်အလက်များကိုတွက်ချက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်မှာအမိန့်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ရန်အခြေခံမှာ -
အရောင်းအဝယ်စာချုပ် (သို့) GDPR ၏အပိုဒ် ၆ (၁) (ခ) ကိုဝယ်သူဝယ်သူ၏တောင်းဆိုချက်အရဆောင်ရွက်သည်၊
ရောင်းသူအတွက်စာရင်းကိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောတရား ၀ င်တာဝန် (အပိုဒ် ၆ (၁) (ဂ) နှင့်
မည်သည့်တောင်းဆိုမှုများကိုမဆိုအတည်ပြုရန် (သို့) ခုခံကာကွယ်ရန်အတွက်အချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲတွင်ပါဝင်သောရောင်းသူ၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွား (GDPR ၏အပိုဒ် ၆ (၁) (စ)) ။
၀ ယ်သူမှအချက်အလက်များကိုပေးသည်မှာမိမိဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်အရောင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်လိုအပ်သည်။ အချက်အလက်များကိုမဖြည့်ဆည်းပါကစတိုးဆိုင်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းကိုတားဆီးလိမ့်မည်။
Store တွင် ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ ယ်သူ၏ဝယ်သူအချက်အလက်သည် -
ရောင်းချသူသည် ၀ ယ်သူ၏အချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ရန်တရားဝင်တာ ၀ န်ယူမှုမရှိတော့ပါ။
စတိုးဆိုင်မှချုပ်ဆိုထားသောအရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ဝယ်သူ (သို့) ရောင်းသူ၏တောင်းဆိုချက်များကိုလိုက်နာရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုရပ်တန့်သွားမည်။
၀ ယ်သူ၏ ၀ င်သူ၏အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းအပေါ်ကန့်ကွက်မှုကိုလက်ခံလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အချက်အလက်ရောင်းရန်အတွက်အခြေခံသည်ရောင်းသူ၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါက
- ကိစ္စရပ်တစ်ခုတွင်မည်သို့အသုံးချနိုင်သည်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အဖြစ်အပျက်များပေါ် မူတည်၍ ။
၀ ယ်သူ၏အခြေအနေနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်အချက်အလက်များကိုအပြောင်းအလဲအတွက်အချိန်မရွေးကန့်ကွက်ရန် - အနုပညာအပေါ် အခြေခံ၍ သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ရန်။ ၆ စက္ကန့်။ ၁ လီတာ GDPRf(ဆိုလိုသည်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှလိုက်နာသည့်တရားဝင်အကျိုးစီးပွားများ) ။
သူ၏အခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးနိုင်ရန်အတွက် ၀ ယ်သူသည်စည်းမျဉ်းများ§ ၂ မှအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ ရောင်းချသူကိုဆက်သွယ်သင့်သည်။
အကယ်၍ ၀ ယ်သူကသူ၏အချက်အလက်များကိုတရားမဝင်လုပ်ဆောင်နေသည်ဟုယူဆပါက ၀ ယ်သူသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးရုံး၏ဥက္ကto္ဌထံသို့တိုင်ကြားချက်ကိုတင်ပြနိုင်သည်။
၀ ယ်သူအားတရားမ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုပေးရန်တားမြစ်ထားသည်။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အခြေခံ၍ သဘောတူညီချက်များကိုပိုလန်ဘာသာဖြင့်ရေးထိုးထားသည်။
၀ ယ်သူမဟုတ်သူ ၀ ယ်သူနှင့်အငြင်းပွားမှုဖြစ်နိုင်လျှင်အရည်အချင်းရှိသောတရားရုံးသည်ရောင်းသူ၏ထိုင်ခုံအတွက်အရည်အချင်းရှိသောတရားရုံးဖြစ်သည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံစံသည်ထုတ်ကုန်ပုံစံအားသုံးစွဲသူမှသုံးနိုင်သည် (သို့) အသုံးမပြုနိုင်သည် -
(သင်စာချုပ်မှနုတ်ထွက်လိုပါကမှသာဤပုံစံကိုဖြည့ ်၍ ပြန်ပို့သင့်သည်)
ရေမှတ်SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul ။ ဝိန်း Fort Służew 1 B / 10, 02-787 ဝါဆော
e-mail လိပ်စာ: office@waterpoint.pl
- ငါ / ကျနော်တို့ (*) ..................................................................... ဤဥပဒေကိုအောက်ပါပစ္စည်းများ (*) ၏ရောင်းရငွေ၏စာချုပ်မှငါ့ / ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်သိမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်. (*) အကြောင်းကြား / အကြောင်းကြား / (*) အောက်ပါဝန်ဆောင်မှု (*) အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာထောက်ပံ့မှုအတွက် (*) ၏ပုံစံ:
- စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်နေ့စွဲ(*)/ လက်ခံဖြတ်ပိုင်း(*) ……………………………………………………………………………………………… ..
- စားသုံးသူ (များ) ၏အမည်နှင့်အမည်: …………………………………………………………………………………………………… ……
- စားသုံးသူ (များ) ၏လိပ်စာ: ……………………………………………………………………………………………………………… …………
...................................................................................................................................................... ........................... ။
4 § အကောင့်
5 § တိုင်ကြားချက်များ
6 § ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ
7 § ကြိုတင်မှာကြားထား
အကောင့် - ဤစည်းမျဉ်းများတွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပါ ၀ င်သောအခမဲ့စတိုးဆိုင်လုပ်ဆောင်ချက် (၀ န်ဆောင်မှု) သည် ၀ ယ်သူသည်သူ၏တစ် ဦး ချင်းအကောင့်ကိုစတိုးတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကုန်ဆိုင် - Waterpoint.pl တွင်ရောင်းသူမှဖွင့်လှစ်သော Waterpoint.pl အွန်လိုင်းစတိုး
အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းသည်လုံးဝမိမိဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ပြီး ၀ ယ်သူ၏ဆန္ဒအပေါ်မူတည်သည်။
ဤအကောင့်ကဝယ်သူအနေဖြင့်ထပ်ဆောင်းရွေးချယ်စရာများကိုပေးသည်။ ဥပမာ - စတိုးတွင် ၀ ယ်သူက ၀ ယ်ထားသည့်အမှာစာများ၏သမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်ခြင်း၊
အကောင့်ဖန်တီးသည့်အချိန်တွင်ဤစည်းမျဉ်းများတွင်ဖော်ပြထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရအကောင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၀ ယ်သူနှင့်ရောင်းသူအကြားအကန့်အသတ်မရှိကာလအတွင်းသဘောတူညီမှုတစ်ခုရရှိသည်။
အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းရန်အတွက်သင်၏နှုတ်ထွက်စာကိုရောင်းသူထံသို့အောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာသို့ပို့ပေးပါသည် ။@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ point
အကောင့်လည်ပတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားမှုများကို office@waterpoint.pl သို့အီးမေးလ်လိပ်စာများပို့သင့်သည်။
အကောင့်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်ဝယ်သူမှပေးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏စီမံခန့်ခွဲသူသည်ရောင်းသူဖြစ်သည်။ ရောင်းချသူမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက် - အပြောင်းအလဲအတွက်အခြားရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အချက်အလက်များအပါအဝင်အချက်အလက်ရယူသူများ, စတိုးဆိုင်ရှိရရှိနိုင်သည့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီတွင်တွေ့နိုင်သည် - ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနိယာမ, ဥရောပပါလီမန်အထွေထွေစည်းမျဉ်းများတွင်ပါရှိသောဥရောပကောင်စီနှင့်ကောင်စီ (အီးယူ) ) ဒေတာကာကွယ်မှုအပေါ် -RODO"။
၀ ယ်သူ၏အချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ရန်မှာ Account ကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအပြောင်းအလဲအတွက်အခြေခံသည် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ် ၀ ယ်သူ၏တောင်းဆိုချက်အရဆောင်ရွက်သည့်စာချုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ (GDPR ၏ပုဒ်မ ၆ (၁) (ခ) အရရောင်းချသူ၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွားသည်ဒေတာများကိုပြုပြင်ရန်အတွက်အကျိုးပြုသည်) GDPR ၏မည်သည့်တောင်းဆိုချက်များကိုမဆိုလိုက်နာခြင်းသို့မဟုတ်ကာကွယ်ခြင်း (အပိုဒ် ၆ (၁) (စ)) ။
၀ ယ်သူမှအချက်အလက်များကိုပေးသည်မှာမိမိဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်စာရင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။ ဒေတာများကိုမအောင်မြင်ပါကရောင်းသူသည်အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှု ၀ န်ဆောင်မှုကိုမပေးနိုင်ဟုဆိုလိုသည်။
အရေးကြီးသောအကြောင်းပြချက်များဖြစ်ရပ်တွင်၊ အပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၄။ ရောင်းသူသည်ဤအကောင့်စည်းမျဉ်းများကိုပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောအရေးကြီးအကြောင်းပြချက်။ ၃ ခုမှာ
စတိုးဆိုင်၏လည်ပတ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောတရား ၀ င်ပြprovisions္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ Store ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်
၀ ယ်သူသည်အကောင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားပြောင်းလဲရန်စီစဉ်ထားသောအကြောင်းကိုအနည်းဆုံး ၇ ရက်အကွာတွင်အီးမေးမှတစ်ဆင့်အကောင့်သို့သတ်မှတ်ထားသောလိပ်စာသို့အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
ဝယ်သူကစီစဉ်ထားသောပြောင်းလဲမှုကိုလက်မခံပါကသူသည်ရောင်းချသူအားအီးမေးလ်လိပ်စာ shop@sklep130599.shoparena.pl သို့သင့်လျော်သောစာတစ်စောင်ပို့ခြင်းဖြင့်အကြောင်းကြားသင့်သည်၊ ၎င်းသည်အကောင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစာချုပ်ရပ်စဲသွားခြင်းကြောင့်ရလဒ်ပြောင်းလဲမှုသည်အစီအစဉ်အပြောင်းအလဲဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်အစောပိုင်းကဝယ်သူကတောင်းဆိုလျှင်။
အကယ်၍ ၀ ယ်သူသည်၎င်း၏အပြောင်းအလဲကိုအင်အားမ ၀ င်မှီကန့်ကွက်ပါက၎င်းကိုသူလက်ခံသည်ဟုယူဆပြီးနောင်တွင်စာချုပ်ရပ်စဲရေးအတွက်မည်သည့်အတားအဆီးမျှမရှိပါ။
သတင်းလွှာ - ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှစတိုးဆိုင်နှင့်ပတ်သက်သောကမ်းလှမ်းချက်များ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးနှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူထံမှ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူထံမှယခင်ကအမိန့်ပေးထားသည့်မက်ဆေ့ခ်ျများမှ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားလက်ခံရရှိနိုင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကုန်ဆိုင် - ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမှဖွင့်လှစ်သော Waterpoint.pl အွန်လိုင်းစတိုးကို www.waterpoint.pl
service provider က - ရေအမှတ်တံဆိပ်SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄသည်သူတို့၏မှတ်ပုံတင်ရုံးနှင့် ul ။ Fort Służew 1 B / 10, 02-787 Warsaw, KRS နံပါတ် 0000604168, NIP နံပါတ် 5213723972, NIP နံပါတ် 36379813000000, ဝေါ့စဝါမြို့တော်ဝါဆောမြို့တော်၏ခရိုင်တရားရုံးမှလုပ်ငန်းရှင်များမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အမျိုးသားတရားရုံးမှတ်ပုံတင်ခြင်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်။ ။
အဆိုပါလိုင်း - သတင်းလွှာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောအဖွဲ့အစည်းတိုင်း။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ပေးပို့သည့်အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများသည်သတင်းလွှာတွင်စာရင်းသွင်းသည့်အချိန်တွင်ဖောက်သည်မှပေးသောအီးမေးလ်လိပ်စာသို့ပေးပို့လိမ့်မည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်စာချုပ်တစ်ခုချုပ်ဆိုရန်နှင့် Newsletter ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူရန်အတွက်ပထမအဆင့်တွင်သူ၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုစတိုးဆိုင်တွင်ဤနေရာအတွက်သတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင်သတင်းလွှာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ပေးပို့လိုသောမက်ဆေ့ခ်ျများပို့ပေးသည်။ ထို့နောက်ပထမအဆင့်တွင်ဖော်ပြထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာသို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအား ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ဆန္ဒကိုသတင်းလွှာတွင်စာရင်းသွင်းရန်အလိုအလျောက်အတည်ပြုရန်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအတည်ပြုသည့်စာတစ်စောင်ကိုပေးပို့လိမ့်မည်။ ဝယ်သူကသတင်းလွှာကိုရယူရန်သူ၏ဆန္ဒကိုအတည်ပြုပြီးသောအခါ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုထားပြီး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူက ၀ ယ်သူအားဝယ်သူကိုစတင်ပေးလိမ့်မည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များမကျစေဘဲ၊ စာပိုဒ်၌ရည်ညွှန်းထားသောရွေးချယ်မှုကို အသုံးပြု၍ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသတင်းလွှာကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ office@waterpoint.pl သို့ပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်ပေးပို့ပါ။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကသတင်းလွှာကိုဖျက်သိမ်းရန် (သို့) သတင်းလွှာမှပယ်ဖျက်ရန်တောင်းဆိုချက်ဖြင့်စာတစ်စောင်ပေးပို့ရန် link ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုချုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်သည်ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းသွားလိမ့်မည်။
§ ၃ တိုင်ကြားချက်
သတင်းလွှာနှင့်ပတ်သက်သည့်တိုင်ကြားချက်များကို service@waterpoint.pl အောက်ပါ e-mail လိပ်စာတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူထံအကြောင်းကြားသင့်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည်တိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် ၁၄ ရက်အတွင်းတိုင်ကြားချက်ကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မည်။
§ ၄ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်
သတင်းလွှာကိုစာရင်းပေးသွင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော ၀ န်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူမှပေးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစီမံခန့်ခွဲသူသည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအပြောင်းအလဲနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ - အချက်အလက်များအပြောင်းအလဲအတွက်အခြားရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အချက်အလက်များအပြင်အချက်အလက်လက်ခံသူများကိုစတိုးရှိရရှိနိုင်သည့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီတွင် - ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနိယာမ၏အထွေထွေစည်းမျဉ်းများပါ ၀ င်သည်ဥရောပပါလီမန်နှင့်ကောင်စီ (အီးယူ) ) ဒေတာကာကွယ်မှုအပေါ် -RODO"။
သုံးစွဲသူ၏အချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ရန်မှာသတင်းလွှာကိုပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အခြေခံသည်၎င်း၏နိဂုံးချုပ် (GDPR ၏အပိုဒ်6(1) (ခ)) ၏ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံသူ၏တောင်းဆိုမှုမှာယူသောဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်များများအတွက်စာချုပ်အဖြစ်တရားဝင်အကျိုးစီးပွား, အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ဒေတာအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် တောင်းဆိုမှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ကာကွယ်ခြင်း (GDPR ၏အပိုဒ် ၆ (၁) (စ)) ။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှအချက်အလက်များကိုပေးသည်မှာမိမိဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင် Newsletter ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်လိုအပ်သည်။ ဒေတာများကိုပျက်ကွက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ဒေတာသည် -
သတင်းလွှာနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူကတောင်းဆိုမှုများကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရပ်သွားလိမ့်မည်။
၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ခဲ့ပါကအချက်အလက်များအပြောင်းအလဲအတွက်အခြေခံအချက်အလက်များသည် အကယ်၍ သုံးစွဲသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းအပေါ်ဖောက်သည်မှကန့်ကွက်ခြင်းကိုလက်ခံလိမ့်မည်
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်တောင်းဆိုရန်အခွင့်အရေးရှိသည် -
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏အခြေအနေနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်အချက်အလက်များကိုအပြောင်းအလဲအတွက်အချိန်မရွေးကန့်ကွက်ရမည် - အနုပညာအပေါ် အခြေခံ၍ သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ခြင်း။ ၆ စက္ကန့် ၁ လီတာ GDPRf(ဆိုလိုသည်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှလိုက်နာသည့်တရားဝင်အကျိုးစီးပွားများ) ။
သူ၏အခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးနိုင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံသူသည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်ဆက်သွယ်သင့်သည်။
အကယ်၍ ၀ န်ဆောင်မှုခံသူကမိမိ၏အချက်အလက်များကိုတရားမဝင်ဆောင်ရွက်နေသည်ဟုယူဆပါက ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးရုံး၏ဥက္ကto္ဌထံသို့တိုင်ကြားချက်ကိုတင်ပြနိုင်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည်အရေးကြီးသောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဤစည်းမျဉ်းများကိုပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အရေးကြီးသောအကြောင်းပြချက်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူက ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့် Newsletter ၀ န်ဆောင်မှု၏ခေတ်မီခြင်းသို့မဟုတ်ဥပဒေပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစည်းမျဉ်းများကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပြောင်းလဲရန်စီစဉ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖောက်သည်၏အီးမေးလိပ်စာသို့သတင်းလွှာတွင်စာရင်းသွင်းသည့်အချိန်တွင်ပြောင်းလဲမှုများမပြုလုပ်မှီအနည်းဆုံး ၇ ရက်အလိုတွင်ပေးပို့လိမ့်မည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအနေဖြင့် ၄ င်းတို့အင်အားမဝင်မချင်းစီစဉ်ထားသောအပြောင်းအလဲများကိုကန့်ကွက်ခြင်းမရှိပါက၎င်းကိုသူလက်ခံသည်ဟုယူဆသည်။
စီစဉ်ထားသောအပြောင်းအလဲများကိုလက်ခံရန်ပျက်ကွက်ပါက ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်၎င်းသတင်းအချက်အလက်များကို service Provider ၏ e-mail address office@ officepoint.pl သို့ပေးပို့ရမည်။ ၎င်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုစာချုပ်အားအစီအစဉ်အပြောင်းအလဲများအားစတင်ခြင်းအားအဆုံးသတ်စေလိမ့်မည်။
၀ ယ်ယူသူအားတရားမ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများပေးရန်တားမြစ်ထားသည်။